अकेष्ट्राको विषयमा झडपमा हुँदा एकको मृत्यु - Nepal Post Daily
जनकपुरधाम, असोज ३ । महोत्तरीमा दुई पक्ष बिच भएको झडपमा एकजनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा जिल्लाको सोनमा गाउँपालिका वडा नं. २ तरहारी इमलिया टोलका ५० वर्षीय रामप्रसाद राय यादव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिएका ।
आज उपचारको क्रममा गएराति विश्वकर्मापुजाको अवसरमा सोनमा गाउँपालिका वडा नं. ७ मैनटोलामा अर्केष्ट्रा ल्याइएको थियो । सोही अर्केष्ट्रा हेर्न यादव पक्षका व्यक्तिहरु गएकोमा झगडा भएको थियो । सोही विषयलाई लिएर आज दुई पक्षबिच हानाहान भएको थियो । सोही क्रममा घाइते भएका यादवको मृत्यु भएको छ भने उनका छोरा २४ वर्षीय मोदनारायण राय यादव र २२ वर्षीय सरोज यादव घाइते भएका छन् ।
घाइते दुबैजनाको उपचार भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक आचार्यले बताए । यता घटनामा संलग्न सोनमा गाउँपालिका वडा नं. ७ का ३५ वर्षीय मलेशी सदा र २८ वर्षीय नथु सदालाई पक्राउ गरिएको छ । यिनीहरु बाहेक अरु पनि चारपाँच जना बिच हानाहान भएको थियो । यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।
Previous articleघरको तलाबाट हाम फाल्दा एक युवतीको मृत्यु
Next articleजनकपुरमा नेपाल राष्ट्रवादी नागरिक समाजद्वारा विरोध प्रदर्शन